ပေကျင်းဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ရှီ တက်ရောက်မည် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားအားကစားရုံ၏ ဝေဟင်မြင်ကွင်း ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်တွင် ဒရုန်းဖြင့် ရိုက်ကူးထားသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်မှ ၆ ရက်အထိ ကျင်းပမည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ပေကျင်း ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသော ပြည်ပနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံ့အကြီးအကဲများ၊ အစိုးရခေါင်းဆောင်များ၊ တော်ဝင်မိသားစုများနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ ခေါင်းဆောင်များအတွက် ဂုဏ်ပြုဧည့်ခံပွဲ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နှစ်ဘက် ဆက်စပ်သော တွေ့ဆုံဆောင်ရွက်မှုများလည်း ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဟွာချွမ်းရင်က ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။ (Xinhua)
From February4to 6, President Xi Jinping will attend the opening ceremony of the 2022 Beijing Winter Olympic Games, holdawelcoming banquet for foreign heads of state, heads of government, members of the royal family and heads of international organizations attending the ceremony, and have relevant bilateral activities, Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying made the announcement Friday. Enditem
Photo-Picture taken with drone on Oct. 28, 2021 shows an aerial view of China’s National Stadium. (Xinhua/Zhang Chenlin)